नयाँ कोरोना भाइरसबाट भ,टा,भ,ट मान्छे ढ,ल्न थाले, बिश्वमै तिब्रताका साथ फैलिएपछी मान्छेहरु आतंकित ! – " सुलभ खबर "
नयाँ कोरोना भाइरसबाट भ,टा,भ,ट मान्छे ढ,ल्न थाले, बिश्वमै तिब्रताका साथ फैलिएपछी मान्छेहरु आतंकित !
वैज्ञानिकहरुले कोभिड–१९ नाम दिएको नयाँ कोरोना भाइरसबाट विश्वमा शुक्रबार मध्यान्नसम्ममा दुई हजार ८७३ व्यक्तिकोनिधन भएको समाचार आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस कोभिड–१९ भाइरसको स’ङ्क्र’मण विश्वका ५६ देशमा फैलिएको जनाएको छ । विश्वभर कूल ८३ हजार ८५३ व्यक्तिमा यस भाइरसको स’ङ्क्र’मण भएको बताएको छ । शुरुमा चीनमा मात्र सिमीत रहेको यो स’ङ्क्र’मण दक्षिण कोरिया र इरान हुँदै विश्वमा नै फैलिन थालेकोले यस अवस्थालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै चिन्तापूर्ण अवस्थाका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को स’ङ्क्र’मण विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिने क्रम तीव्र हुन थालेपछि यो स’ङ्क्र’मण फैलिएका देशबाट आफ्ना देशमा प्रवेश गर्ने तथा फर्किने नागरिकलाई विश्वका सबै देशले विमानास्थलहरुमा नै व्यापक मात्रामा निगरानी बढाएका छन् । यसबाट विश्वको बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधिहरु प्रभावित हुने मात्र होइन कि खासमा पर्यटन कार्यक्रमहरुलाई नै उनीहरुले रोकेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले बिहीबार मात्रै विभिन्न सात देशमा कोभिड–१९ को स’ङ्क्र’मणको चिन्ताजनक अवस्था देखिएको पुष्टि गरेको छ । ती बाहेकका पनि विश्वका अरु कैयौँ देशमा यो भाइरस देखिएको छ । ती देशलाई सतर्क रहन उसले चेतावनी पनि दिएको छ । ती देशबाट स्वदेश भित्रिनेलाई रोक लगाउने वा विमानस्थलमा परीक्षणमा कडाइ गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक तयारीहरु गर्न र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमा कोरोना रोकथामका कार्यक्रमहरु पनि राख्न उक्त संगठनले सम्बद्ध देशका अधिकारीहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
उहाँले बिहीबारसम्म दक्षिण कोरियामा दुई हजारभन्दा धेरै र जापानमा सात सयभन्दा धेरैमा यो भाइरसको स’ङ्क्र’मण देखिएको पनि पुष्टि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी इटालीमा ६५० जनामा भाइरसको स’ङ्क्र’मण पुष्टि भएको समाचार प्राप्त भएको पनि सो अवसरमा उहाँले खुलासा
गर्नुभएको थियो ।विश्व स्वास्थ्य संगठनले बेलायतलगायत युरोपका जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र स्पेनमा यसको स’ङ्क्र’मण देखिएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले चीनका अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, इटाली, इरान र जापानमा यो स’ङ्क्र’मण हजारौँ बिरामी रहेका छन् । साथै उक्त संगठनले दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकामा पनि यसको खतरा रहेको बताएको थियो । ती देशलाई पनि उच्च जोखिमको व्यवस्थापनमा लाग्न आग्रह गरिएको छ ।
उक्त भाइरसको उत्पत्ति भएको भनिएको मूख्यभूमि चीनमा कोरोना भाइरसका कारण शुक्रबारसम्म दुई हजार ७८८ व्यक्तिकोनिधन भएको छ भने ७८ हजार ८२४ जनालाई स’ङ्क्र’मण पुष्टि भैसकेको छ । बिहीबार साँझ ५ बजेपछि शुक्रबार दिउसो १ बजेसम्म चीनमा थप ४१ जनाकोनिधन भएको छ भने ३२७ जना नयाँ व्यक्तिमा स’ङ्क्र’मण पुष्टि भएको बताइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका अन्य मुलुकहरूमा कूल पाँच हजार २९ व्यक्तिमा स’ङ्क्र’मण भएको छ भने चीनबाहेक अन्य मुलुकमा कूल ८५ जनाकोनिधन भएको छ । विश्वभर यो अवधिमा थप ९६६ जनामा स’ङ्क्र’मण पुष्टि भएको छ ।
चीनपछि सबैभन्दा बढी स’ङ्क्र’मण देखिएका मुलुकहरूमा दक्षिण कोरिया पहिलो हो । दक्षिण कोरियामा शुक्रबार मध्यान्नसम्म दुई हजार ३३७ जनालाई यो भाइरसको पुष्टि भएको छ । दक्षिण कोरियामा थप ५७१ जनामा त गएको २४ घण्टाभित्र स’ङ्क्र’मित भएका छन् । दक्षिण कोरियामा उपचारका क्रममा १३ व्यक्तिकोनिधन भएको छ । त्यस्तै इटलीमा यस भाइरसका कारण १७ जनाकोनिधन भइसकेको छ ।
उता इरानमा पनि शुक्रबारसम्म ३४ जनाकोनिधन भएको सरकारी स्रोतले बताएको थियो । यद्यपी स्वास्थ्य अधिकारीहरुले भने शनिबारसम्म २१० जनाकोनिधन भएको बताएको छ । जापानको योकोहामास्थित एक पानीजहाजमा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस स’ङ्क्र’मण भएको पुष्टि भएको छ । जापानका अन्य स्थानमा कूल २१० व्यक्तिमा कोरोना भाइरस देखिएको छ । जापानमा यसबाट आठ जनाकोनिधन भएको बताइएको छ ।
उता साउदी अरेयिबा सरकारले इस्लाम धर्मालम्बीहरूको पवित्रस्थल मक्का र मदिना तथा अन्य धार्मिकस्थलहरुको भ्रमणमा पनि रोक लगाएको जनाएको छ । यस्ता स्थलहरुमा विदेशी नागरिकको आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारले गरेको समाचारमा जनाइएको छ । आगामी जुलाइको अन्त्यतिर शुरूहुने हजको तयारी पूर्वका यस्ता भ्रमणहरु रोक लगाइएको जनाइएको छ । साउदी अरेबिया सरकारले नयाँ कोरोना भाइरस फैलिएका देशबाट आउने पर्यटकहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर साउदी अरेबियामा हालसम्म कोरोना भाइरसको स’ङ्क्र’मण भने देखिएको छैन ।
यता विश्वका देशहरुले यो स’ङ्क्र’मणका विरुद्धमा व्यापक मात्रामा लडिरहेका बेला चिकित्सकहरुले यो स’ङ्क्र’मण फर्किन पनि सक्ने बताएका छन् । निको भएर घर फर्किएका यसका बिरामीहरुमा पुनः यसको स’ङ्क्र’मण देखिएको जापान र चीनबाट प्राप्त केही समाचार विवरणहरूमा जनाइएको छ । मानिसहरू निको भइसकेको भनेर घर गएपछि पनि केही सातापछि पुनः स’ङ्क्र’मित भएर अस्पताल आएका
उनीहरुको भनाई छ । चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले करिब १४ प्रतिशत बिरामीहरू निको भइसकेपछि पनि फेरि स’ङ्क्र’मणमा परेको पाइएको बताएका हुन् ।निको भएका भनिएका ती मानिसको शरीरमा भाइरस पूर्ण रुपमा नष्ट नभइसकेको र यससम्बन्धी परीक्षणहरू पनि सधैँ सही नहुने भएकोले पनि स’ङ्क्र’मितहरु लाई फेरि दोहोरिएको अनुमान चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । तर पनि घटनाहरूबारे थप जानकारी लिएर अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरू लागेका बताइएको छ । वैज्ञानिकहरु यस प्राणघातक स’ङ्क्र’मणको औषधिको खोजीमा लागेका छन् । तर अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन । उता विश्वका कैयौँ देशमा यसको स’ङ्क्र’मण फैलिइरहेको छ र यसबाट विश्व नै त्रसित बनेको छ ।